Home » News na ụgbọ elu » Ntinye ụgbọ elu US kwụsịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% na 2020
Nwere ike 10, 2021
Onu ogugu ego nke ugbo elu US nile ruru $ 130 ijeri na 2020
Na 2020, ụgbọ elu US nwere mbelata 47% YoY na ụtụ sitere na 2019
Gbọ elu si na US jikọrọ ọnụ debanye aha efu nke ijeri 24.6 na 2020
Na 2020, ọnụ ọgụgụ ndị njem ejiri ụgbọelu ejiri ihe karịrị 60% gaa naanị nde 369
Njem njem na njem nlere bu otu ihe kachasi oria ojoo 2020 nke oria ojoo. Dabere na data ndị ọhụrụ, ngụkọta ego ndị ọrụ ụgbọ elu US niile ruru naanị ijeri $ 130 na 2020 - mbelata 47% YoY na 2019.
US ụgbọ elu ego ha nwetara fọrọ nke nta ka ọkara n'ihi ọrịa na-efe efe
Ego ndị na-arụ ọrụ maka ụgbọ elu US na-abawanye kwa afọ kemgbe 2015, mana oria ojoo nke 2020 kwụsịrị njedebe a. Na 2019, ngụkọta ego ọrụ ritere ruru ijeri $ 248, ọnụọgụ nke belata na 47% na 2020 ruo naanị $ 130. Onu ogugu 2020 bu kwa nke kachasi ala edere n'ime oge akuko nke 2004 - 2020.
Gbọ elu si na US niile debara aha nha nke ijeri 24.6 na 2020 na 256% bekee si na 2019 mgbe ụgbọ elu US debanyere ego zuru ezu nke $ 15.71. Ọnwụ ụgbụ 2020 bụ nnukwu mkpụmkpụ karịa nke ahụ chere n'oge ọdịda nke 2008 mgbe ọnwu ụla ruru $ 18.17.
Ndị na-ebugharị US jikwaara ndị njem pere mpe 60% Na 2020
Na 2019, ndị na-ebu US ji ihe ruru nde ndị njem 926, ndị mejupụtara nde 811 nde ndị njem ụlọ na ihe ruru nde 115 ndị ​​njem mba ofesi. Na 2020, ọnụ ọgụgụ ndị njem nke ndị ọrụ US nyere aka gbadara ihe karịrị 60% ruo naanị 369 nde.
Njem nke ụlọ kwụsịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ijeri ndị njem na naanị 335.35 nde. Ihe ebufe ndị njem nke ụlọ bụkwa nke kachasị ala na 2020 n'oge oge akụkọ na naanị 58.86% ma e jiri ya tụnyere elu nke 85.11% edere na 2019.
A hụrụ ọdịda ka ukwuu na ọnụọgụ nke ndị njem mba ofesi nke ndị na-ebugharị US. Na 2020 ọnụ ọgụgụ ahụ gbadara site na 90% dị egwu na naanị 34 nde ndị njem.
Thelọ ọrụ ụgbọ elu ahụ gbarụrụ site n'ọrịa ahụ n'agbanyeghị agbanyeghị ike siri ike nke ewulitere n'ime afọ ole na ole gara aga. Ihe karịrị otu afọ mgbe nje ahụ jichara njigide akụ na ụba ụwa, ọtụtụ ejighị n'aka ka ga-adịkwa ka 'nkịtị ọhụrụ' ga-adị na ihe ọ pụtara maka ọdịnihu nke njem ụgbọ elu.